फ़िचर – Pahilo Page
तेस्रो आयाम र लीला लेखनका अभियन्ता ईन्द्रबहादुर राईको निधन
दार्जिलिङ । नेपाली साहित्यकार ईन्द्रबहादुर राईको मंगलबार निधन भएको छ । उनको दार्जिलिङ लोचननगरस्थित उनकै निवासमा निधन भएको छ । दार्जिलिङ निवासी नेपाली मूलका भारतीय नेपाली साहित्यकार राईले नेपाली साहित्य र भाषाको श्रीवृद्धिमा दिएको योगदान अमूल्य छ। नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा उनले दिएको योगदानका कारण उनी विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मानबाट
सञ्चारकर्मी र गायक छत्र परियार जीवन–मरणको दोसाँधमा
“झर्छन् आँसु बल्झिन्छ मनको घाउ तिम्रो याद मेटाउन कहाँ जाऊँ मठमन्दिरमा गछ्र्यौ भाकल लाखौं कोसिस गर्दा नि तिम्लाई भुल्न सकिन निरमाया तिम्ले भुल्दा भाछु पागल” राजपुर– ९ भौवानाकाका छत्र परियारले यस्तो गीत गाउँदा उनी आफैलाई थाहा थिएन होला आँसु कहाँ झर्छन् र मनको घाउ कहाँ–कहाँ बल्झिन्छ भन्ने कुरा । यी
दाङ महोत्सवमा नृत्य र शोभायात्रा दुबैमा गोरखा स्कूल प्रथम
पहिलोपेज दाङ, ६ चैत । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको दाङ महोत्सव तथा पर्यटन एवं मध्यपश्चिम औद्योगिक कृषि मेला २०७२ को विद्यालयस्तरीय नृत्य प्रतियोगिता र शोभायात्रामा गोरखा इन्टरनेशनल पव्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय घोराही दाङले प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ । महोत्सवको उद्घाटनका क्रममा निकालिएको शोभायात्रामा उक्त
विश्व महिला सम्मेलनका लागि ४० देशका महिला राजधानीमा
“विश्वका महिलाहरु सर्वोच्च शिखर चुम्दैछन्” भन्ने मूल नारा
काठमाडौं । “विश्वका महिलाहरु सर्वोच्च शिखर चुम्दैछन्” भन्ने मूल नाराका साथ दोस्रो विश्व महिला सम्मेलन आइतवारदेखि राजधानीमा शुरु भएको छ । विश्वका ४० देशका महिलाहरुको सहभागिता रहेको महिला विश्व सम्मेलनको उद्घाटन आइतवार सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले गरेकी छन् ।
हृवाइट हाउस छाडेपछि ओबामा कहाँ बस्छन् ?
२२ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अर्को वर्ष हृवाइट हाउस छाड्नेछन् । तर, उनी धेरै टाढा जाने छैनन् । ओबामाले भनेका छन् कि १४ वर्षीया छोरी साशाको पढाई पुरा नहुँदासम्म उनी वाशिङटनमै रहनेछन् । साशा वाशिङटनको सिडवेल फ्रेन्ड्स स्कुलमा पढि्छन् । हाइस्कुल अध्ययनका क्रममा बीचै अर्को स्थानमा लैजान
सरदारलाई भोट हाल्न यस्तो सकस (फोटो फिचर)
कांग्रेसमा अपाङ्गमैत्री नीति नभएको गुनासो
२३ फागुन, काठमाडौं । मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ का कांग्रेस नेता राजाराम सरदार शारीरिकरुपमा अशक्त छन् । उनी सबलाङ्ग सरह हिँडडुल गर्न सक्दैनन्, उनलाई ह्वील चियरको आवश्यकता पर्छ । तर, आइतबार महाधिवेशनस्थलमा मतदान गरिरहेका सरदारसँग न हि्वलचेयर थियो, न त कसैले उनलाई सहयोग नै गरिरहेको देखियो । कांग्रेसको १३ औं
मेरी श्रीमती: अचेल जिस्केर मैले उनको खुट्टा ढोग्छु
हामी अझै प्रेमी-प्रेमिका नै हौं
२३ फागुन, काठमाडौं । ‘हजुर, म फलानो । मैले हजुरको छोरीलाई मन पराउँछु, बिहे गर्न चाहन्छु,’ मैले उनको बुवालाई फोन गरेर भनेँ । उनीसँग सल्लाह गरेरै उनको बुवालाई फोन गरेको थिएँ । सुरुमा त बुवा अलमलमा पर्नुभयो । नेपाली संस्कारअनुसार हाम्रो जात मिल्दैनथ्यो- उनी नीलम शाह ठकुरी र म क्षेत्री-बाहुन
शेरबहादुर देउवाः को हुन् ? कसरी उदाए राजनीतिमा ?
गिरिजा र ज्ञानेन्द्रको पेलाइबाट पाकेका नेता
२४ फागुन, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको मुख्य पदका लागि दोहोर्‍याएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदैछन् । तर, यो पहिलोपटक हो, जहाँ देउवालाई प्रमुख दाबेदार ठानिएको छ । र, यो उनका लागि अन्तिम अवसर पनि ठानिएको छ । कांग्रेसको राजनीतिमा ५० वर्षदेखि संलग्न ६९ वर्षीय देउवाका लागि पार्टीमा
रामचन्द्रको दशाः न प्रधानमन्त्री, न वनवास !
पौडेलको हारसँगै सिंह, महत र कोइरालाको कन्तबिजोग
२५ फागुन, काठमाडौंं । नेपाली कांग्रेसमा वैचारिक एवं सादगी नेताको छवि बनाएका रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुर देउवासँग पार्टी सभापतिमा भारी मतले पराजित भएका छन् । यो पराजयसँगै पौडेलको राजनीतिक भविश्य संकटमा परेको छ । रामचन्द्र पौडेलको पराजयसँगै प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत र सुजाता कोइराला लगायतका नेताहरुको राजनीतिक ‘करिअर’मा पनि ग्रहण